Inonyanya kuzivikanwa yeApple Music iyi 2017 kuSpain ndeiyi: Ed Sheeran, Luis Fonsi naJoaquín Sabina | Ndinobva mac
Sezvo gore rega rega Apple inotiratidza kubudirira kukuru mukushandisa kwayo, maBooks, maPodcast, mimhanzi nevamwe, uye gore rino 2017 paApple Music vatove nema hits avo akanyatsotsanangurwa. Izvo zvinogara zvakanaka kuti ujekeswe nezvevanyori vanozivikanwa uye nziyo munyika medu uye mune izvi zviri pachena kana tikatarisa kune anotora uye zvinyorwa.
Sezvatinoona mumusoro wenyaya ino, Ed Sheeran, Luis Fonsi naJoaquín Sabina, ndivo vatongi vakajeka muSpain maererano neApple Music. Kune rimwe divi, ivo vanotaurawo nezveIwe wakasarudzwa kune GRAMMY Awards, ayo anga ari maartist eApple Music Up Inotevera 2017 Khalid, Daniel Caesar uye 6LACK.
Ino nguva iyo Album yegore "Govanisa" naEd Sheeran, uye rwiyo rwakanyanya kubudirira ndi "Despacito" naLuis Fonsi (naDaddy Yankee). Panzvimbo yechipiri mumaSpanish machati machati eiyi 2017 tinowana iyo albhamu "Ndinoramba Zvese" naJoaquín Sabina.
Ichokwadi ndechekuti Apple inomhanyisa mimhanzi sevhisi iri kushanda nemazvo uye hatigone kuti makwikwi akadzikama, pane zvakapesana. Apple inowanzoita zvinhu nemazvo kana zvasvika kumimhanzi uye kana iwe uchiwedzerawo kuti vane mari yakakwana uye mukurumbira kukwikwidzana vakatarisana nemunhu wese, mhedzisiro yacho yakanaka. Chero zvazvingaitika, kune mamirioni evashandisi vasina kuchinja vatambi uye nekuenderera mberi nevamwe vatambi, asi vamwe vazhinji kuti zvive nyore kana zvavanofarira zvachinja kuita Apple uye Ivo vanogutsikana nekatalog, iko kushanda kweApp uye nevamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Inonyanya kufarirwa yeApple Music iyi 2017 muSpain ndeiyi: Ed Sheeran, Luis Fonsi naJoaquín Sabina